Clindamycin (ကလင်ဒါမိုင်စင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Clindamycin (ကလင်ဒါမိုင်စင်)
Clindamycin (ကလင်ဒါမိုင်စင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Clindamycin (ကလင်ဒါမိုင်စင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
clindamycin ကို ဘာအတွက် အသုံးပြုပါသလဲ။
clindamycin ဝက်ခြံကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ဝက်ခြံကြောင့် အနာဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။ Clindamycin သည် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ၏ ပေါက်ပွားခြင်းကို တားဆီးပေးသည့် lincosamide အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
clindamycin ကို ဘယ်လိုသောက်သင့်ပါသလဲ။
ဤ ဆေးကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကို လိုက်နာပါ။ ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပိုသောက်ခြင်း၊လျော့သောက်ခြင်း၊ အချိန်ပိုသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
သင့် လည်ချောင်းကို မထိခိုက်စေရန် ရေ တစ်ဖန်ခွက်နှင့် သောက်ပါ။
ဆေးရည်ကို ပါသော ဆေးထိုးအပ် သို့မဟုတ် ဇွန်း သို့မဟုတ် ဆေးချင်သော ခွက်ခြင့် တိုင်းတာပြီး သောက်ပါ။ သင့်တွင် ဆေးကို တိုင်းတာသည့် အရာမရှိလျှင် ဆေးရောင်းသူကို မေးပါ။
Clindamycin ကိုအသားထဲသို့ ထိုးခြင်း၊ အကြောဆေးအနေဖြင့် ထိုးခြင်းတို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ ပြုလုပ်ကြသည်။ သင့်ကို အိမ်တွင် ဆေးထိုးရန်ကို ပြသနိုင်သည်။ သို့သော် သင်ဆေးမထိုးတတ်လျှင် သို့မဟုတ် ထိုးပြီးသားအပ်ကို မစွန့်ပစ်တတ်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်ဆေးထိုးခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
တစ်ခါသုံး ဆေးထိုးအပ်ကို သုံးပါ။ ဆေးထိုးအပ်များကို စွန့်ပစ်ရန် သင့်ဒေသတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပါ။ ဆေးထိုးအပ်များကို စွန့်ပစ်ရမည့် စိတ်ချရသော ဘူးထဲတွင် စွန့်ပစ်ပါ။ ထိုစွန့်ပစ်သည့် ဘူးကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။
ဤဆေးသည် အန္တရာယ်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။
ဆေးကို သောက်ရမည့် အညွှန်းအတိုင်းသောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး မကြာခင် လက္ခဏာများသက်သာသွားနိုင်သော်လည်း သောက်ရမည့် ရက်ပြည့်သည်အထိ သောက်ရမည်။ ရက်မပြည့်မီ ဆေးရပ်လိုက်လျှင် ရောဂါပိုးပြန်ဝင်နိုင်ခြင်းနှင့် ဆေးယဉ်ပါးခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Clindamycin သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သော အအေးမိခြင်း နှင့် တုပ်ကွေးရောဂါများကို မသက်သာစေပါ။
Clindamycin ဆေးကို မည်သို့ ထားရှိသင့်ပါသလဲ။
Clindamycin သည် အခန်းအပူချိန်တွင်သာထားရပြီး နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျပြီး စိုစွတ်သော နေရာများတွင် မထားရပါ။ ဆေးကို မပျက်စီးစေရန် ရေချိုးခန်းနှင့် အအေးခန်းများတွင် မထားရပါ။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ထားရှိရမည့် ပုံစံကွာနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသည့် အခွံပေါ်တွင် ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကို မေးမြန်းပါ။ ဘေးကင်းစေရန် ဆေးများအားလုံးကို ကလေးများနှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ နှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။
ဆေးနှင့် ပတ်သတ်သော လေ့လာမှုများသည် လူကြီးများတွင်သာ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် သီးသန့် အချက်အလက်များ မရှိပါ။
အသက်ကြီးသူများအတွက် သီးသန့် ပြုလုပ်ထားသော လေ့လာမှုများမရှိနေပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေးနှင့်ပတ်သတ်သောအကြောင်းများတွင် လူငယ်များနှင့် တူညီသော အနေအထားရှိ၊ မရှိမသိနိုင်ပါ။ တိကျသောအချက်အလက်များ မရှိသော်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် လူကြီးများတွင် လူငယ်များနှင့် ခြားနားမှုမရှိဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။
အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပြီး ဆေးကို ရပ်ပါ။
• ဝမ်းလျောခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း။
• အသားဝါခြင်း၊ မျက်လုံးဝါခြင်း။
• ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း။
• သွေးခြည်ဥလွယ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးယိုခြင်း (နား၊ ပါးစပ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ အစာဟောင်းအိမ်တို့မှသွေးယိုခြင်း)၊ အနီစက်များပေါ်ခြင်း။
• ဖျားခြင်း၊ လည်ပင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ၊ လျှာများ ရောင်ယမ်းခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ အသားနာခြင်း၊ အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ အရည်ဖုထွက်ခြင်း၊ အရေပြားကွာခြင်း၊
ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
• ဝမ်းသွားသည့်ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း
• ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း
• မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်း၊ အဖြူဆင်းခြင်း
• အနီကွက်များထွက်ပြီး ယားယံခြင်း
• ရင်ပူခြင်း၊ လည်ချောင်းယားခြင်း။
clindamycin သည် မည်သည့် ဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလဲ။
clindamycin သည် သင်သောက်နေသော အခြားသော ဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဆေးအချင်းချင်း ဓါတ်ပြုမှုကို ကာကွယ်ရန် သင်သောက်နေသောဆေးများအားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ သင့်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ဆေးရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ ဆေးပြောင်းခြင်းများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
clindamycin ကို အောက်ပါဆေးများနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။ သင့်ဆရာဝန်မှ ဆေးကို ဆက်မသုံးရန်၊ သို့မဟုတ် အခြားဆေးကို ပြောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
clindamycin ကို ဤဆေးနှင့် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ သုံးရန်လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်မှ ဆေးပမာဏကို ညှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် သောက်သည့် အကြိမ်ရေကို လျော့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Atracurium, Metocurine, Tubocurarine
အစားအသောက်၊ အရက် တို့သည် clindamycin နှင့်ဓါတ်ပြုမှု ရှိနိုင်ပါသလား။
clindamycin သည် အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် clindamycin ကို အသုံးပြုလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မည့်သည့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများတွင် clindamycin ဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုမှု ရှိနိုင်ပါသလဲ။
clindamycin သည် သင်၏ ကျန်မာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း၊ ဆေး၏ အာနိသင်ကို ပြောင်းလဲစေခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်၏ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ဖူးလျှင် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက် လူကြီးဆေးပမာဏ
၁၅၀ မှ ၃၀၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့လေးကြီမ်။ သို့မဟုတ် ၆၀၀ မှ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ် အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေး တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ခွဲထိုးပါ။
ပိုမို ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက် လူကြီးဆေးပမာဏ
၃၀၀ မှ ၄၅၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့လေးကြီမ်။ သို့မဟုတ် ၁၂၀၀ မှ ၂၇၀၀ မီလီဂရမ် အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေး တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ခွဲထိုးပါ။
ပိုမိုပြင်းထန်သောရောဂါအတွက် – ၄၈၀၀ မီလီဂရမ်အထိ အကြောဆေးကို ပုလင်းဖြင့်သွင်းနိုင်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းလျင်
အနည်းဆုံးပမာဏ- ၃၇.၅ မီလီ၈ရမ် တစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် ၁၁ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်များလျှင်
ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက် ၈-၁၂ မီလီဂရမ် ကို ကိုယအလေးချိန်အတိုင်းတွက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲတိုက်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောရောဂါအတွက် – ၁၃-၁၆ မီလီဂရမ် ကို ကိုယအလေးချိန်အတိုင်းတွက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲတိုက်နိုင်သည်။
ပိုမို ပြင်းထန်သောရောဂါအတွက်- ၁၇-၂၅ မီလီဂရမ် ကို ကိုယအလေးချိန်အတိုင်းတွက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲတိုက်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက် – ၈-၁၆ မီလီဂရမ် ကို ကိုယအလေးချိန်အတိုင်းတွက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲတိုက်နိုင်သည်။
ပိုမိုပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက် – ၁၆-၂၀ မီလီဂရမ် ကို ကိုယအလေးချိန်အတိုင်းတွက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲပြီး အကြောဆေးအနေဖြင့် သွင်းနိုင်သည်။ လမစေ့သော ကလေးများတွင် လျော့တွက်ရမည်။
တစ်လမှ ၁၆ နှစ်
ကိုယ်အလေးချိန်အတိုင်း တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မှ ၄၀ မီလီဂရမ်ကို ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်တွက်ပြီး အကြောဆေးဖြင့် သုံးလေးကြိမ် ခွဲသွင်းပါ။ ပိုမို ပြင်းထန်ပါက ဆေးပိုတိုးနိုင်သည်။
ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက်- ၁ မီတာစကွဲ လျှင် ၃၅၀ မီလီဂရမ် ကို အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေးဖြင့် ထိုးပါ။
ပြင်းထန်သော ရောဂါအတွက်- ၁ မီတာစကွဲ လျှင် ၄၅၀ မီလီဂရမ် ကို အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေးဖြင့် ထိုးပါ။
၁၇ နှစ် နှင့် အထက် ကို ပုံမှန် လူကြီးပမာဏကို ပေးပါ။
ကြာချိန်- beta-hemolytic streptococcal infection အတွက် အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်ပေးပါ။
clindamycin ကို ဘယ်လိုရနိုင်ပါသလဲ။
clindamycin ကို အောက်ပါ ပမာဏများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
• ဆေးတောင့် ၇၅၊ ၁၅၀၊ ၃၀၀ မီလီဂရမ်